News - Horumarinta Iyo Warshadaynta Xaashida Birta ee Isku Xirayaasha Korontada
Horumarinta Iyo Warshadaynta Xaashida Birta ee Isku Xirayaasha Korantada
Bishii Febraayo 25,2020, Waaxda Suuqa ee Jitai Electronics Co., Ltd ayaa abaabushay kulanka caadiga ah ee suuqa, Kulankan, waxaan go'aansanay horumarin isku xirayaasha korantada si dhaqso leh si aan u siino suuqa adduunka oo dhan kulmiyaal koronto oo tayo iyo qiimo fiican leh.
Waaxdayada cilmi baarista iyo horumarinta waxay tilmaamtay in isku xirayaasha korantada si balaaran loogu isticmaalay aerospace / duulista hawada, sababo la xiriira shuruudo ka yar qalabka elektarooniga ah, aluminiumka yar ee cufnaanta yar ayaa ah qalab ballaaran oo kaamil ah kulanka. iyo faafitaan wanaagsan iyo tikniyoolajiyad qaan-gaar ah oo aan ku adkeyn been abuurka iyo kharash ka yar been-abuurka ayaa ku habboon isticmaalka ballaaran, sidaa darteed shirkadeennu waxay ku takhasustay hal isku xira koronto u dhigma.
Waxaan ku guuleysanay xalka afar dhibaato farsamo dhowr sano oo dadaal ah.
Isku dheelitirka ballaadhintu wuxuu u dhigmi karaa xirmada isku-darka aluminium iyo xulashada agabka lagu xirayo insulators-ka dhalada.
Daloolada yar yar ee dahaarka dhalada ayaa adkeeyay sameynta dhalada insulators-ka iyo hubinta dhexroorka dulqaadka u dhigma iyo sidoo kale dhererka u dhigma shuruudaha isticmaalka.
3.Wax yar oo leedh ah, isugeyn balaarinta kuleylka inta udhaxeysa xirmada iyo leedhka wey weynyihiin naqshadeynta qaabkuna waa sare.
Tikniyoolajiyadda elektaroonigga ee hogaanka godka leh godad yar oo muraayad ah
Horumarinta isku xiraha korontada ee ka sameysan aluminium ee loo yaqaan 'Aluminium alloy' ayaa u furi doonta suuqa shirkadeena inay ku soo biirto isku imaatinka xirmada biraha ee isku xira korontada leylaka mirco iyo hagaajinta booska nashqadeynta iyo sameynta wax soosaarka ee warshadaha iyadoo dhanka kale la hagaajinayo heerka cilmi baarista cilmiga ee xirmada isku xira korantada Samee diyaarinta farsamada ee horumarinta tikniyoolajiyada heer ka sareeya mustaqbalka.
Jitai Electronics Co., Ltd waxay u hoggaansan tahay hal-abuurnimo aan dhammaad lahayn si aan marna u joojin tallaabooyinka horay loo sii wado, waxaan had iyo jeer siineynaa macaamiisha xalka ugu sarreeya ee ah jihadayada dadaalkeenna. Via dadaallada aan dhammaadka lahayn, waxaan noqon doonnaa hoggaamiyaha aagga isku xira korantada.